छायाँसँग एकरात | Online Sahitya
– सुबिसुधा आचार्य
हो, म त्यहीँ अँध्यारोभित्र आफूलाई खोज्दै अनुमानसँग अनुभव धरौटी राखेर पार गर्छु तमोर नदी एउटा सानो लठ्ठीको सहायताले । हुन त त्यति जवान भएकी छैन ऊ तर पनि नदी, खोला नतरेको मेरो बानी ढुङ्गामा लागेको लेउ करौती बन्छ मेरो साहसलाई टुक्रयाउन अनि त गुहार माग्छु नर्कटको सिम्किनुसँग ।
छामछुम खोजखाज गर्छु केहीबेर, अब खाली खुट्टाले पैताला दर्फराउँदै लाग्नु पर्ला उकालो, व्यर्थै एउटीलाई बचाइ टोपल्न जाने भैखाको नयाँ जुत्ता गुमाउनुप\_यो । गुनासो पोख्छु आफँैलाई, उकालो लाग्न थाल्छु बानी भए पो खाली खुट्टाले हिँड्ने, ढुङ्गाका गेगरले बिझाएको आभाष तालुसम्म छ पैतालादेखि ।
“लौन त मैले सोधेँ अब त भन, कहाँ हो तिम्रो घर ?” तपार्ईंको भन्दा पल्लो गाउँ हो मेरो, म गा.वि.स. सचिव अमरनाथकी कान्छी छोरी छायाँदेवी हुँ, हुनसक्छ तपार्ईंंले मलाई चिन्नु हुन्न ।”
“तिमीले चाहीँ मलार्ईं चिन्छौ र ?” अँध्यारोको शून्यतालाई थप्पड हिर्काउँदै उनी खिलखिलाएर हाँस्छिन् पाखा पर्वत थकाउँदै, कसोकसो मीठो लाग्छ मलाई त्यो हाँसो कतै आफ्नोपन घोलिएझैँ । “नचिनेको मान्छेको जुत्ता पु\_याउन मलाई के खाँचो ?” उनी फेरि हासिन् त्यसरी नै ।
“बजारमै कसैकहाँ बास पनि त बस्न सक्थ्यौ नि, यति राती नदीमा डुबेर चिच्याउनुको कारण, के साँच्चै नदी तर्नै नसकेर हो त ?”
“छिः तपार्ईं त असाध्यै सोझो हुनुहुँदो रैछ । श्रावणको भेल त एक्लै तर्ने म चैतमा सुकेको नदी तर्न सकिनँ हुँली त, तपार्ईंलाई बोलाएकी नि मैले ।” उनी डाँडा गुन्जिने गरी हाँस्छिन् ।
“हेर्नुस् न आज बिहानदेखि मेरो मुखमा एक घुट्को पानीसम्म परेको छैन साह्रै थाकेकी छु । भोक, प्यास र थकानले गर्दा तपार्ईं मलाई केही सहयोग गर्नुस् न बिन्ती छ, यी हेर्नुस् (अँध्यारोमा पनि हातले इसारा गर्दै) हात गोडा लल्याक लुलुक भएका छन् । पाइलै सर्दैन पटक्कै अगाडि, म कसरी हिडौँ ?”
“छैन तपाईंसँग कुनै विकल्प, यानेकि उपाय ? छिः कस्तो नामर्द, यहाँ एउटी भोकी प्यासी अशक्त महिला लखतरानमा बसेकी छे, उता तपार्ईं भने कति ढुक्कले सुसेल्दै बस्न सक्नु भएको, हे भगवान ! उपाय दिनुस् यी मर्द भनाउँदालाई ।” दुई हात जोडेर फर्किन्छिन् सप्तऋषितर्फ ।
उनी पाँच वर्षको अबोध बच्चालेझैँ मेरो दुवै हात समातेर उफ्रन थाल्छिन् । कसरी नाइँ भनौँ तर त्यहाँ त जङ्गल नै जङ्गल छ कसरी उसको साथीको घर भयो ? एकमन यसरी सोच्छु भने अर्को मन जागिरको सिलसिलामा गाउँ नफर्केको आठ दश वर्षै भयो म । त्यसको अवधिमा घाँस र पानीको सुविधा खोज्दै कोही बसाइ सरेर आयो होला, तर … भीरमा घर बनाएर जग्गा अवादी गरी बस्नु पनि कम कठिनको कुरा होइन । उनको कुरामा विश्वास गरेर सहमति जनाउँदै लाग्छु म उनकै पछिपछि ।
उनी एकदम अट्टहासको हाँसो हाँस्छिन् । एउटा कोठाभित्र पसेर सुन्दर सोफामा बस्दै– कोही छैन यो घरमा तपार्ईं र म मात्र छौ ।”
“अनि के त यी सब मात्र नमुना हुन् तपार्ईं मसँग नजिकिदै जानुस् न कस्तो कस्तो खाना खुवाउँछु म ?” छड्के आँखा झिमिक्क बनाउँदै बोल्छिन् उनी ।
उनको भनाइको अर्थ बुझ्न सकिन, दिमाग घुम्छ फुइँफुइँ तर पनि तारेको माछा चपाउन भने छाड्दिन म । जे खायो त्यही असाध्यै स्वादिलो पेट भरिन्छ, मन भरिन्न पटक्कै । जीवनमै पहिलो पटक यस्ता खानेकुरा खान पाउँदा म स्वासले ननिल्ने कुरै भएन । अन्तमा, उनले फ्रिजबाट वियर ल्याएर टेबलको गिलासमा खन्याइन् । हामी दुवै चियर्स भन्दै पिउन थाल्छौँ ।
थोरै पिउन नपाउँदै झुमझुम बन्छु म । बसेको कुर्सीबाट उठ्न हम्मे हम्मे पर्छ मलाई, आफ्नै दाइने हातको टेको दिएर खुब होसियारी साथ ओच्छ्यानमा पुरयाउँछिन् उनी । जुत्ता मोजा खोलिदिएकी, सर्ट पाइन्ट फुकाली दिएकी कता कताको धमिलो दृश्य हेरिबस्छु म । आधा सपना जस्तो अनि आधा बिपना जस्तो । कोठाको प्रकाश अझ धमिलो हुँदै छ आफूले लगाएको साडी र ब्लाउज खोलेर मसँगै पलङ्गमा पल्टेको देख्छु उनी पनि । थाहा छैन उनका हातहरू मेरो शरीरको कुनकुन अङ्गसम्म स्पर्श गर्न पुग्छन् मलाई अझँै अनौठो आनन्द उत्पन्न हुन्छ शरीरभरि तरङ्ग फैलिएर, उनी टाँसिन्छिन् मसँग लपक्क लिसो टाँसिएझैँ त्यसपछि… ।
“उमङ्ग ! बाबु ए उमङ्ग बाबु ।” कसैले घचघच्यााउँदै बोलाएको आवाजले झल्यास्स हुन्छु म । बिस्तारै आँखा खोल्छु वारिपारि डोको बोकेका घाँसेहरू झुम्मेर मलाई पो घेर्दै रैछन् । माथि घरे कान्छी आमा निधार छाम्दै बोल्नु हुन्छ,
मन एक तमास सतहझैँ बन्दै जान्छ, स्तब्ध रहन्छ सोचाइ, बिहानीको कलिलो शिशु किरण लत्पत्त पोत्दै छ डाँडा, पाखा र बुटयानलाई, घामको मायालु स्पर्शमा हेलिएर सुस्त सुस्त बहन्छ हावा, बयली खेलाउँदै रूखका हाँगाहरू । यस्तो लाग्छ राती मेरो जीवनमा घटेको घटनासँग अपरिचित छैनन् उनीहरू । त्यसैले पनि मलाई अप्ठेरो लाग्छ उनीहरू सामु आफूलाई प्रस्तुत गर्नमा ।
लामो सुस्केरामा बुबा आफ्नै सुरमा गुनगुनाउनु हुन्छ मेरो ध्यान भने उहाँको गुनगुनाइभन्दा राती आफूले भोगेकै घटनामा केन्द्रित रहन्छ । बडो अजिबको अखण्ड भोगाइ भयो त्यो । अँ साँच्ची उनले गा.वि.स. सचिवकी छोरी छायाँदेवी भनेकी थिइन् । भएन म छायाँलाई भेट्न उनकै घर जान्छु । मनले मनसँग योजना बनाइरहेकै बेला नानीले एक गिलास दूध ल्याएर अगाडि राखिदिन्छे र शरीरको पसिना पनि ओभायो अब त फलैंचाबाट जुरूक्क उठेर तातो तातो दूध घटघट पिउँछु र लाग्छु गाउँकै साथी हेम कहाँ ।
केही बेर हाम्रो यस्तै सवाल जवाफ, घोचपेच चल्छ । त्यहीँ दुर्ईकप चिया लिएर एउटी अपरिचित महिला आउँछिन् ।
यसरी परिचय गराउँछ ती महिलासँग हेमले । मलाई उनी दुर्ईहात जोडेर नमस्कार गर्छिन् ।
म हेमको कुराले छटपटिन्छु । बसेकै ठाउँमा लगलग काम्छ शरीर । डरलाग्छ भित्रभित्रै त्यही खहरेको भीरको फेदी, तमोर नदीको किनारमा त हो नि उसले मलाई लगेकी । के यस्तो पनि हुन्छ मरेको मान्छे कसरी जीवित भएर खोलादेखि मसँगै सवाल गर्दै आई, नाइ यो हुन सक्दैन, फेरि त्यो महल, उसँग बिताएको रात, खलखल पसिना छुट्छ । चारैतिर अँध्यारो देख्छु, मेरो वाक्य बसेर किलकिली झंै अन्तर कुन्तर घुम्छ फुइफुइ । हेम उठेर मलको चपरी फ्याक्न थाल्छ धमाधम, म भने चारैतिर अँध्यारो छाएको वातावरणमा सोचिरहन्छु रातीको घटना, छायाँ, भव्यमहलसँगै एउटै पलङ्गमा पल्टेको र रात बिताएको अनि ऊ मरिसकेको कुरा … । विश्वास र अविश्वासको धुवाँले निल्न खोज्छ मलाई आफूभित्र भित्रै … ।